Ginger Factory - mpanamboatra sy mpamatsy ginger China
Ny vokatry ny hatsembohana amin'ny ririnina dia tena tsara, misy gingerol ao aminy izay afaka manafaingana ny fivezivezan'ny rà ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ary afaka manokatra ny mason-koditra, hamela ny hatsembohan'ny vatana, olona voan'ny tazo mahery tsy misy hatsembohana, mihinana sakamalao ririnina rehefa mandeha ny fotoana dia afaka mampiroborobo ny famoahana ny hatsembohana, ary ny maripanan'ny vatan'olombelona dia haverina amin'ny laoniny haingana araka izay tratra.
Ny vovoka sakamalao dia vita amin'ny sakamalao sakamalao. Satria ny tombo-kase sakamalao dia nahitana fiatraikany lehibe teo amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina amin'ny vatana, noho izany ny fisotroana vovo-sakamalao, mazava ho azy, dia afaka manampy ara-pahasalamana lehibe koa. Noho izany, ny vovo-tsiranoka dia manana famoahana desuperheating, mampiroborobo ny fahazotoan-komana, ny fanoherana ny oksidra, manakana ny fivontosana, ny fahanterana, ny hatsiaka, misoroka ny aretin'ny fihetsika, manatsara ny kalitaon'ny torimaso sy ny lafiny maro amin'ny anjara asa sy ny vokany. Noho izany, ho an'ny fiasan'ny gastrointestinal dia tsy tsara, tsy fahazotoan-komana, soritr'aretina mafy, tsy torimaso tsara, vovoka sakamalao dia karazan-tsakafo sy fanafody tena tsara.
Misy gingerol efatra na dimy heny noho ny fampitahana ny sakamalao voajanahary amin'ny sakamalao mahazatra, ary na dia malefaka aza izy io, dia mandoka. Fanampin'izany, ny ginger organika dia ambany fibre, noho izany dia matsiro sy mamelombelona kokoa izy noho ny sakamalao mahazatra.
Ny sakamalao dia fotony manana fofona manitra manitra sy tsiro mampiavaka azy! ny sakamalao vaovao dia tsiro iray lehibe amin'ny sakafo asiana maro. Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny ginger ihany no nohanina amin'ny habetsahana kely ka azo heverina ho manan-danja kokoa amin'ny tsirony noho ny lanja mahavelona. Mampiasà sakamalao ho an'ny tsiro amin'ny fries, salady, lasopy ary marinade. Ampiana amin'ny sakafo amin'ny faran'ny fandrahoan-tsakafo satria very ny tsiro ny sakamalao, arakaraky ny faharetany no mahandro.